မှတ်ချက်: 20 မှတ်တမ်းများအများဆုံးပြသလျက်ရှိသည်။ ပိုပြီးဒီမျိုးစိတ်များ၏အသံသွင်းအဖြစ်မြေပုံများ, sonograms နှင့်အဆင့်မြင့်ရှာဖွေမှုများကိုအဘို့, သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး xeno-canto, macaulaylibrary.org & avocet.zoology.msu.edu.
Avibase သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့ပြီး 288,432,945 24 ဇွန်လ 2003 ကတည်းကကြိမ်. © Denis Lepage | ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ